ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ဗုဒ္ဓ၀င်(ဘုရား)ဖြစ်စဉ် အကျဉ်းချုပ်
မြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ဗဟုသုတကိုမိမိ မှတ်သားခဲ့ရတာကို သူငယ်ချင်းများကိုလည်း မိမိကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်(ဘုရား)ဖြစ်စဉ် အကျဉ်းချုပ်ကို သိစေလိုသော ဆန္ဒဖြင့် ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁၊ ဗျာဒိတ်(ဘုရားဖြစ်ရန် စတင်)ခံယူသောဘ၀- သုမေဓာရသေ့ ဘ၀။
၂၊ ဗျာဒိတ်ပေးသောဘုရား- ဒီပင်္ကရာ အစပြု၍ ကဿပဘုရားရှင်အထိ ၂၄ဆူ။
၃၊ ပါရမီ(ဘုရားဖြစ်ရန်ကုသိုလ်)ဖြည့်ဖတ်မိဖုရား- (ဗျာဒိတ်ခံစဉ်) သုမိတ္တာ အမျိုးသမီး၊ “ယသောဓရာအလောင်း”။
၄၊ ပါရမီဖြည့်ရာကြာချိန်ကာလ- လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း။ (သုမေဓာရသေ့ဘ၀မှ ဝေဿန္တရာမင်းဘ၀အထိ)။
မှတ်ချက်။ ။(၁-အသင်္ချေသည် ၁-နောက် သုညပေါင်း ၁၄၀-ဟုကြားဘူး၏)
၅၊ ပါရမီဖြည့်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်- သတ္တ၀ါများ အကျိုးဆောင်ရွတ်ရန်။
၆၊ ပဋိသန္ဓေမယူမီဘ၀- သေတကေတုအမည်ရှိ နတ်သားဘ၀။
၇၊ ဘုရားဖြစ်ရေး ပဋိသန္ဓေယူရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားသူ- စကြာဝဠာ တိုက်တစ်သောင်းမှ နတ်ဗြဟ္မာများ။
၈၊ ကြည့်ခြင်းကြီး ငါးပါး- (ဘုရားအလောင်းပဋိသန္ဓေနေမည့်အချိန် ကာလစသည် ကြည့်ခြင်းကိုဆို) (၁) ဘုရားဖြစ်ရာ အခါကာလ၊ (၂) ဖြစ်ရာကျွန်း၊ (၃) အရပ်ဒေသ၊ (၄) အမျိုးအနွယ်၊ (၅) မယ်တော်၏အသက်။(မယ်တော်သည် ဘုရားဖွားမြင်ပြီး ၇-ရက်သာနေသည်)။
၉၊ နေပြည်တော်- ကပိလ၀တ္ထု (သက္ကလတိုင်း၊ မဇ္ဈိမတိုင်းဒေသ)။
၁၀၊ မိဘအမည်- သုဒ္ဓေါဒနမင်း၊ မာယာဒေ၀ီမိဖုရား။
၁၂၊ ပဋိသန္ဓေယူသောနေ့- ကြာသာပတေးနေ့၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၆၇-ခု၊
၁၃၊ ဖွားမြင်သောနေ့- သောကြာနေ့၊ ကဆုန်လပြည့်၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈-ခု၊
(The Buddha was born in B.C 623.)၁၄၊ ဖွားမြင်ရာဌာန- နီပေါနိုင်ငံ၊ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ် (ကပိလ၀တ်ပြည်နှင့် ဒေ၀ဒဟပြည် အကြား)
၁၅၊ ဖွားဖက်တော် ၇-ပါး (ဘုရားနှင့် တစ်နေ့တည်းဖွားမြင်/ ပေါ်ပေါက်လာသော)
၆၊ ရွှေအိုးကြီး ၄-လုံး၊
၁၆၊ လူအမည် သိဒ္ဓတ္ထ။
၁၇၊ ကြင်ရာတော် (Wife) ဘဒ္ဒကဉ္စနာ။(ရွှေလိုလှသူ)။
၁၈၊ သားတော် (Son) ရာဟုလာ။
၁၉၊ ယောက်ဖတော် ဒေ၀ဒတ်။
၂၀၊ နန်းစံနှစ် ၁၃-နှစ် စိုးစံသည်၊ (အသက် ၁၆-နှစ်မှ ၂၉-နှစ်အထိ။)
၂၁၊ နိမိတ်ကြီး ၄-ပါး သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်း။
၂၂၊ တောထွက်သောနေ့ -တနင်္လာနေ့၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၉၇-ခု၊
(He renounced the world in B.C 594.)၂၃၊ ဒုက္ကရစရိယာ(ပင်ပန်းခက်ခဲသော)ကျင့်သော ကာလ ၆-နှစ်၊ (မဟာသက္ကရာဇ် ၉၇-ခုမှ ၁၀၃-ခုနှစ် အထိ)။ (Till B.C 588.)
၂၄၊ ဒုက္ကရစရိယာ(ပင်ပန်းခက်ခဲ)ကျင့်သော နေရာ ဥရုဝေလတော။ (ဗုဒ္ဓဂယာအနီး)
၂၅၊ ဘုရားဖြစ်သောနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ကဆုန်လပြည့်၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခု၊
(He attained Enlightenment or became Buddha in B.C 588.)
၂၆၊ ဘုရားဖြစ်ချိန် အသက်တော် ၃၅-နှစ်။
၂၇၊ ဘုရားဖြစ်ရာ (အချိန်၌) လူတို့အသက်တမ်း ၁၀၀-တမ်း။
၂၈၊ အလုပ်အကျွေး ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ(၅-ဦးအဖွဲ့)ငါးဦး (ဘုရားဖြစ်ရန်ကျင့်စဉ်ကာလ)
၂၉၊ ဓမ္မစကြာတရားဟောနှစ် စနေနေ့၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခု၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊
(He preached Dhammacakka in B.C 588.)
၃၀၊ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြု(ကွယ်လွန်)သောနှစ် သက်တော် (၈၀)၊ ၀ါတော် (၄၅)၊ အင်္ဂါနေ့၊
ကဆုန်လပြည့်၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈-ခု၊ (အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကုသိနာရုံ)။
(He passed away in B.C 543.)၃၁၊ အလောင်းတော် တေဇောဓာတ်သင့်(မီးသင်္ဂြိုဟ်) သောနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ကဆုန်လဆုတ် ၁၂-ရက်၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈- ခု။ရောက်ရှိလာကြသောမိဘဆွေမျိုး သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ. . .